Amnesty iyo Midowga Yurub oo ku dhagan C/rashiid Janan | KEYDMEDIA ONLINE
Amnesty iyo Midowga Yurub oo ku dhagan C/rashiid Janan
Hay’adda u doodda Xuquuqul Aadanaha ee Amnesty International iyo Midowga Yurub, ayaa ka hadlay isa soo dhiibidda Cabdirashiid Janan, waxaana Dowladda Fadaraalka lagu booriyay in cadaaladda la marsiiyo Janan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa iska soo daba dhacaya Hay’adaha iyo iyo Ururada dalbanaya in cadaaladda la hor keeno Cabdirashiid janan oo hore loogu eedeeyay inuu danbiyo dagaal iyo gabbood fallo ka dhan ah bini’aadannimada ka geystay Gedo.
Shalay ayay ahyad markii Hay’adda u doodda Xuquuqul Aadanaha ee Amnesty International ay Dowladda Fadaraalka Soomaaliya ku boorisay in Wasiirkii hore ee Amniga Jubbaland lagu sameeyo baaritaan la xariira gabood fallada uu galay.
War qoraal ah oo ka soo baxay Ha’yadda Amnesty ayaa lagu yiri “Hadda Cabdirashiid Janan wuxuu ku jiro gacanta Dawladda Federaalka Soomaaliya, mas’uuliyiintu waa inay hubiyaan caddaaladda iyo la xisaabtanka dhammaan xad-gudubyada xuquuqul insaanka ee la sheegay inuu ka gaystay gobolka Gedo.”
Hay’adda u doodda Xuquuqul Insaanka, ayaa sidoo kale sheegtay in dadkii uu dhibaatada u geystay Cabdirashiid janan ay u baahan yihiin in ay caddaalad helaan.
“Dhibbanayaasha iyo qoysaska saamaynta ku yeeshay waxay mudan yihiin caddaalad.” ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Amnesty.
Dhanka kale Midowga Yurub ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay waxa cafiska u muuqda ee Farmaajo u sameeyay eedeysane Cadirashiid Janan, kaas oo u eedeysan Dowladda Soomaaliya iyo hay’ado Caalami ah.
Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga oo qoraal gaaban uu uga hadlayay arrinta Janan soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in waxa ay guusha moodaan ay tahay mid uu xilligeedu gaaban yahay.
Cabdirashiid Janan ayaa shalay isku soo dhiibay Dowladda Fadaraalka, wuxuuna si buuxda uga goostay maamulkii uu wax ka dhisay ee Jubbaland.